Kazakhstan: Tsy Ankasitrahana Ny ‘Fitsabahan’ny’ Tandrefana Any Amin'ny Raharaham-pitsarana	Voadika ny 28 Septambra 2012 9:12 GMT
Zarao: Tamin’ny volana Desambra 2011 lasa teo, nanafintohina an’ilay firenena zatra filaminana teo aloha izay tsy iza fa i Kazakhtan, ny fiafaran’ny grevin’ny mpiasan’ny solitany izay naharitra 7 volana, nisiana fahafatesan'olona tao Zhanaozen akaiky ny Ranomasina Kaspianina. Niteraka tsikera marobe avy amin’ireo mpanaramaso iraisam-pirenena ny valy bontana nataon’ny governemanta tamin'ny fihetsiketsehana sy ny fitsarana nanaraka izany izay nahatafiditra mpanao fihetsiketsehana sy polisy, ary tsarany fa manao izay hamotehana ny endrika fanoherana rehetra ny governemanta ary manadio tena.
Mpanohana ilay mpanao politika mpanohitra Vladimir Kozlov miandry ny didy ao amin’ny efi-pitsarana ao Aktau, andrefan’i Kazakhstan. (Pikantsary tamin’ny lahatsary narakitr’ilay mpisera Youtube, ladakz tamin’ny 16 Aogositra2012). Fijerin’ny ao an-toerana sy ny any ivelany